Others – Page7– Gentleman Magazine
အချိန်ဆွဲခြင်း ရပ်တန့်စေဖို့ နည်းလမ်း ၇ ခု
အခြိနျဆှဲခွငျး ရပျတနျ့စဖေို့ နညျးလမျး ၇ ခု သင် အချိန်ဆွဲတတ်ပါသလား?? ရူပဗေဒပညာရဲ့ Inertia သဘော နှစ်ခုစလုံးဟာ အချိန်ဆွဲတတ်သူတွေအဖို့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ရပ်နေတဲ့ အရာဟာ ဆက်လက်ရပ်နေလိုပြီး ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဟာ ဆက်လက် ရွေ့လျားနေလိုတာပါ။ ဘယ်တစ်ခုက သင့်အတွက် ပိုမှန်ပါသလဲ?? ရပ်နေရာကနေ ရွေ့လျားသွားနိုင်အောင်
လက်တကမ်းမှ အောင်မြင်မှု လကျတကမျးမှ အောငျမွငျမှု ကျရှုံးမှုဖြစ်စဉ်တော်တော်များများရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်တစ်ခုက ခဏတာအခက်အခဲကိုမကျော်လွှားနိုင်ပဲ အလွယ်တကူအရှုံးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမှားမျိုးကို လူတိုင်းလောက်နီးပါးက တစ်ကွေ့မဟုတ် တစ်ကွေ့မှာ ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ R.U. Darby ရဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်ဟာ ရွှေတူးရွှေကြောရှာတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးလမ်းကခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရွှေကို တပ်မက်တဲ့စိတ်ကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သင့်ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံးပြည့်စေဖို့ သင်္ချာ ဥပဒေသလေး တစ်ခု သင့် စိတ်ကြိုက် အလုပ် လုပ်ရဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ သင်္ချာ ဥပဒေသလေးဟာ သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ သူတို့နဲ့ သင့်တော်ရဲ့ အရာတွေနဲ့ပဲ တွဲထားပြီးသားပါ။ အဲဒိအချက်လေးကို
အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထူးထူးခြားခြား အရောင်းပုံစံနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အတော်များများစိမ့်ဝင်ပျံ့နှံလာခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတည်းကလည်း အလားတူပုံစံနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုလောက်အထိ အရေအတွက်မများခဲ့သလို လူသိလည်းနည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ အမှတ်တံဆိပ်နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ငန်းတွေ များစွာပေါ်ထွက်လာပြီး နည်းမျိုးစုံ၊ စနစ်မျိုးစုံနဲ့ ဆွဲဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ Multi-level
တစ်ချိန်က ဘေးချင်းကပ်လယ်ယာ နှစ်ခုမှာ တူတူအလုပ်လုပ်လာကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေကြား ကတောက်ကဆလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါက တူတူအလုပ်လုပ်လာကြတဲ့ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြသနာတက်တာပါ။ အစကတော့ လိုတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ငှါးတာ၊ ငွေကြေး ကုန်ပစ္စည်း ချေးငှါးတာ အားလုံးကို နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ဆုံး ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်လာကြတာပါ။ ခုတော့ ပြသနာသေးသေးလေးက စလိုက်တာ